औसतमा दैनिक छ वटा बलात्कारका घटना !::Online News Portal from State No. 4
औसतमा दैनिक छ वटा बलात्कारका घटना !
चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा औसत ६ वटा घटना भएको प्रहरीको रेकर्ड देखिएको छ।
काठमाडौं, १६ मंसिर -बलात्कार, महिला हिंसा लगायतका घटनामा दोषीमाथि कारबाही हुन नसकेको आवाज नागरिकस्तरबाट उठिरहँदा बलात्कारका घटनाको ‘ग्राफ’ थप वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म औसत दैनिक चारवटा बलात्कारका घटना हुने गरेकोमा चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा औसत ६ वटा घटना भएको प्रहरीको रेकर्ड देखिएको छ। बलात्कारसँगै जबर्जस्ती करणी उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन लगायतका घटना पनि अगाडि बढेका छन्।
संघीय संसद्को महिला तथा समाजिक समितिमा गृह मन्त्रालयले पेस गरेको लिखित प्रतिउत्तर अनुसार चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५९० वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। साउन, भदौ र असोज महिनामा दर्ता भएका यी घटनामा संलग्न ६९७ जना रहेका छन्। जसमा ५६१ जना पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्नमध्ये १३६ जना फरार छन्। प्राप्त उजुरीमा फछ्र्यौट २३२ छन्। ३५८ उजुरी बाँकी छन्।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको छानबिन र महिलामाथि भइरहेका अन्य घटनाबारे समितिले गृह मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको थियो। समितिको निर्देशन अनुसार गृहले निर्मला हत्याको अनुसन्धान र अन्य घटनाबारे समितिलाई लिखित जानकारी दिएको हो।महिला तथा समाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले गृहले सम्पूर्ण घटनाको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको जानकारी दिइन्।
समितिले घटना न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए पनि तथ्याङ्कले भने घटना बढेको देखाउँछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औसत दैनिक चारवटा बलात्कारका घटना प्रशासनसमक्ष दर्ता हुने गरेकोमा अहिले औसत छभन्दा बढी घटना दर्ता भइरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ५९० वटा जबर्जस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएका छन्। यो संख्या दैनिक औसत ६ वटाभन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारका घटना दैनिक औसत चारवटा थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कूल एक हजार ४८० जबर्जस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएका थिए। यस अनुसार औसत चार बलात्कारका घटना भएको देखिन्छ। यी घटनामा एक हजार ३३६ जना पक्राउ गरिएको प्रहरी रेकर्ड छ। सोही घटनामा संलग्न भएका ३३४ अझै फरार छन्। प्राप्त उजुरीमध्ये एक हजार ४१६ फछ्र्यौट भएका र ६४ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन्।